Auto Ac Compressors, Mota Ac Compressors, Rori Mhepo Inodzora - Hollysen
Changzhou Hollysen Technology Trading Co., Ltd.chimwe chikamu cheChangzhou Kangpurui Automotive Air Conditioner Co., Ltd.Iyo indasitiri yekutsvagisa kwehunyanzvi nekusimudzira, kugadzira uye kutengesa mota air-kutonhodza ma compressor uye kupaka ma air conditioners. Indasitiri yedu iri Niutang Industrial Park, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province, zviri pakati Yangtze River Delta, pedyo Shanghai-Nanjing Expressway uye Yanjiang Expressway, pamwe nyore chokufambisa uye nzvimbo dzakanaka.
Zvinopfuura zvigadzirwa 150
BRAND ITSVA AUTO AC MUPINDIRI WEDU chigadzirwa chinopa diki diki saizi, yakadzikira yekushanda ruzha, hwakareba hwakafanira hupenyu hwekushanda, zvirinani maitiro ekuita kweanotonhora mashandiro. Chinhu chakakoshesa zvakanyanya mutengo wakaenzana. Tinogona kuona compressors, iwe uchatenga kubva kukambani yedu kwete chete chigadzirwa pachako, asiwo chirongwa chekuchengetedza uye nzira yebasa chirongwa. Yese gwaro rekumisikidza uye bhuku rebasa rinoteedzerwa needu macompressors. Chikamu Rudzi: A / C Compre ...
BRAND ITSVA AUTO AC KUSIMBITSA Rotary vane compressor, inozivikanwawo seinotsvedza compressor, inova iri mhando ye rotary compressor. Iyo humburumbira yeiyo inotenderera vane compressor ine mhando mbiri: denderedzwa uye denderedzwa. Mune rotary vane compressor ine yakatenderera cylinder, kure-kwepakati chinhambwe cheiyo main axis yeiyo rotor uye pakati peiri humbwa inoita kuti rotor ive padyo nemhepo inlet uye kuburitsa pane yemukati peiri siringi. Mune rotary vane compressor ine oval cylinder, iyo huru axis ye ...
Kunze kwezvikuru zvakakura zvakazvimiririra mota-inodziya mamhepo mayunitsi, akajairika mota air-kutonhodza macomputer akabatana neiyo huru shaft yeinjini kuburikidza nemagetsi emagetsi. Iyo yekumira uye kutanga kweiyo compressor inoonekwa nekukweva-mukati uye kuburitswa kwemagetsi emagetsi clutch. Naizvozvo, yemagetsi batira chinhu chepamusoro chikamu mune otomatiki kudzora system yemota mhepo-kutonhodza. Iyo inokanganiswa neyekushisa switch (thermostat), pres ...
BRAND ITSVA AUTO AC KUSIMBITISA Mota inozorodza mweya compressor ndiyo "moyo" wemotokari mamiriro ekugadzirisa. Kana iyo mota yemhepo inodzora system yashandurwa, iyo compressor inopinda mukuita, kumanikidza uye kutyaira iyo firiji kuburikidza neyakavharwa mweya wekugadzirisa mamiriro. Iyo firiji inotora kupisa mumota kuburikidza nekupisa kwekupisa mune evaporator, uye inoparadzira kupisa kune kunze kwemota kuburikidza nekondensera, kuitira kudzikisa tempera ...
Universal Rori Sleepe ...
CHIDZIDZO MAPARAMETER Chikamu Chikamu Rokupaka ...
Newest Window Mhepo Cond ...
Kupaka mhepo kutonhodza, kutsigira matruck, truc ...
12v 24v inotakurika Unive ...
Chigadzirwa parameter Chikamu Rudzi Kupaka ...